Xukuumada Oo Xisbiyada Mucaaridka Ah Ugu Baaqday Inay La Shaqeeyaan Gudidii Doorashooyinka Ee Dhawaan Xilka La Wareegay | Marsa News
Xukuumada Oo Xisbiyada Mucaaridka Ah Ugu Baaqday Inay La Shaqeeyaan Gudidii Doorashooyinka Ee Dhawaan Xilka La Wareegay
January 15, 2020 - Written by editor marsan
Hargeisa:(Marsanews) Xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa shaacisay in aanu jirin dastuuriyan sharci sheegaya in la kala diro Komishanka cusub ee aan weli hawlgelin, waxaanay xisbiyada mucaaridka ah ku boorisay inay ixtiraamaan shuruucda waddanka u yaalla.
Sidaasna waxa lagu sheegay war-murtiyeed ku qornaa luuqada Ingiriisiga oo Xukuumaddu madaxwayne biixi mawqifkeeda ku caddeysay kaas oo uu soo saaray galabta Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Wacyigelinta Jamhuuriyadda Somaliland Md. Saleebaan Yuusuf Cali Koore.
War-murtiyeedkan oo ku qornaa luuqada afka ingiriiska oo aanu soo turjunay ayaa u dhignaa sidan:
“17kii Bishii December 2019kii, Saddexda xisbi Qaran ee Somaliland Kulmiye, Ucid iyo Waddani waxa ay aqbaleen soo-jeedintii Guddidii isxilqaantay oo soo jeedisay in la kala diro Komishankii dhawaan la magacaabay ee doorashooyinka, isla markaana lagu beddelo Komishankii hore oo iyaga wakhtigoodii dhammaaday bishii November 2019-kii.
Wadatashigani wuxuu ka dhashay isku tanaasul lagu gaadhay in lagaga baxo ismariwaaga ay abuureen xisbiyada mucaaridka ah ee Waddani iyo Ucid, oo diiday inay la shaqeeyaan Komishanka cusub ee Golaha Wakiilladu ansixiyeen 12-kii Bishii November 2019,isla markaana Guddoomiyaha Maxkamadda sare dhaariyey 25-kii November 2019kii.
Kadib, lafagur iyo wadatashiyo lala yeeshay la-taliyeyaal sharci, Xukuumadda waxa gabogabadii u soo baxay, in aanu jirin dastuuriyan sharci qeexaya in la kala diro Komishanka cusub ee aan wali hawlgelin oo aanay fulin karin madaxweyne ama gole Baarlamaan midna, sida kaliya ee lagu beddeli karayaana ay tahay saddexdan qoddob oo kala ah:
Sidaas darteed, soo jeedin kasta oo lagu kala dirayo Komishanka oo ku wajahan siyaasad, sida xisbiyada mucaaridku ku doodeen kuma qeexna sharciga. Sidaas awgeed, ma jirto Hay’ad sharci oo fulin karta qaraar noocan oo kale ah. Heshiiska la gaadhayaanna waa inuu ku salleysnaadaa xuduud sharci.
Xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland waxa si buuxda uga go’an inay ilaaliso nidaamka dimuqraadiyada dalka, si muwaadiniinta dalka loogu xaqiijiyo inay dabaqaan xaqa ay u leeyihiin inay doortaan Wakiilladooda, Dawladda heer qaran iyo Goleyaasha Deegaankaba.